Nkwupụta dị ịrịba ama sitere na Ministri Ọrụ Ugbo na Oke ohia banyere okporo ụzọ North Marmara, nke ga-agafe njikọ OIZ site na ogige XXX nde afọ Ballıkayalar na Gebze, Kocaeli. Ozi nke uzo uzo 200 puku 37 ohia square [More ...]
23 Agba nke mbụ nke ahịrị ụgbọ ala ọhụrụ nke ndị Denizli Metropolitan Municipality ga-emejuputa 2019 Site na August 19 ụbọchị, XNUMX na-amalite site na ahịrị ọhụrụ. Site na usoro ọhụrụ, ekwuputara na nọmba bọs ga-agbanwe kpamkpam. [More ...]
Wasmụ amaala na-erughi afọ nke kaadị ezumike nka 60 na Mersin, akagbuola n'ihi ụkpụrụ iwu. Mersin Metropolitan Municipal Mayor Vahap Selecter, a na-ebu akwụkwọ a site na nchịkwa ndị gara aga nke obodo ahụ na-enweghị usoro iwu, o kwuru. Enweghị ihe mgbochi machibidoro [More ...]
Ndị na-eto eto bịara n'obodo maka ndebanye aha site na mmeri otu mahadum dị na Izmir nabatara aha ịtụnanya na ọdụ ụgbọ ala Izmir. Tunç Soyer, onye isi obodo nke ndị isi obodo ukwu bụ onye gara ọdụ ụgbọ ala n'isi ụtụtụ, kwuru ogez ị nabata İzmir na ndị ntorobịa afọ ofufo ọhụrụ welcomezmir. mahadum [More ...]
Obodo isi obodo Istanbul na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-ewu okporo ụzọ na Maltepe, nke ga-eme ka okporo ụzọ dị n'etiti Başıbüyük na Samandıra belata. N'ime oke ọrụ ahụ, okporo ụzọ ugbu a na Kemer Sokak Hayat Water ga-emechi emechi maka ụbọchị 20. Başıbüyük-Samandıra nke IMM na-arụ [More ...]
Obodo Rize na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji dozie nzere nke okporo ụzọ dị n'etiti etiti obodo. Karịsịa na mpaghara a maara dị ka mgbatị Meteler nke etiti obodo, ndị Rize Municipality were ihe ọhụrụ iji dozie esemokwu okporo ụzọ na-eme n'oge ụfọdụ n'ụbọchị. [More ...]
Mgbe nkwuputa kwupụta 2019 dị ka Bakanlığı Pedestrian Mkporo Traffic afọ tarafından nke Minista ime, Malatya Metropolitan, iji mepụta mmata ndị ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ dị na etiti obodo na mpaghara dị n'ihu ụlọ akwụkwọ ahụ n'ọrụ a rụrụ. [More ...]
A ga-emeghe okporo ụzọ ụgbọ ala ọhụrụ nke Denizli Obodo ukwu na mpaghara 6 dị iche iche 23 August 2019 na Fraịde. N'ime usoro izizi, a kọwara ya na isi ụzọ 19 ga-arụ ọrụ. [More ...]
Obodo Ankara na-aga n’ihu n’ọrụ ya iji nye ndị ọkwọ ụgbọala nke isi obodo ahụ ihe n ’ọ drivingụ na obi ụtọ. Obodo ukwu, nke rụzurula ọtụtụ ọrụ site na nrụrụ okporo ụzọ, oghere ụzọ, ụzọ mbido, na ịgabiga ókè, [More ...]
N'otu aka, ndị ọbịa sitere na mpụga obodo n'aka nke ọzọ, ngwa ọhụrụ a malitere n'isi obodo iji mee ka ndị njem nọ n'obodo dị iche iche 7'den 70'e nata akara zuru oke site n'aka ụmụ amaala. Dika uche ndi mmadu Ankara Obodo Obodo Mayor Mansur Yavaş 4 di iche [More ...]
Obodo Kayseri, Obodo Mahadum Erciyes iji gbochie nsogbu na-abanye n'okporo ụzọ na nsogbu na-adọba ụgbọala iji gbochie ọmụmụ ihe ụlọ na-agakwa n’ihu. N'ọnọdụ a, Onye Isi Obodo nke Obodo ukwu. Memduh Büyükkılıç, Mahadum Erciyes na-aga n'ihu na-aga n'ihu [More ...]
TransportationPark A.Ş., onye otu Kocaeli Metropolitan Obodo, kwupụtara na o meela ụfọdụ ihe mgbochi megide ịdị egwu nke enwere ike ihu tupu Eid al-Adha. Kocaeli Intercity Bus Terminal na-arụ ọrụ nke ationgbọ njem Ọgbọ, n'ihi usoro e mere na enweghị nsogbu ọ bụla lanarịrị Ememme Àjà. ọnụ [More ...]
Obodo Kocaeli Metropolitan, Izmit Salim Dervişoğlu Street 3. ogbo na-aga n’ihu n’iru ọsọ. Okporo ụzọ awara awara D - 100 ga-arụ ọrụ dịka ọ ga - agbanwe gaa n'okporo ụzọ abụọ nwere ụkwụ abụọ. [More ...]
Thegbọ njem na-ebugharị na TransportationPark, onye enyemaka nke Kocaeli Obodo Obodo bụ ụmụ amaala na-eji ya. Udiri 310, nke na-enye njem n'etiti Dilovası, Gebze na Darıca, pụtara dị ka otu n'ime ụgbọ ndị a ma ama. Mpaghara 3 [More ...]
Trabzon, ógbè Ortahisar nke Çilekli, Kavala na ndị Bulak bịara leta Mịnịsta Turhan, soro ndị amaala na-ege ntị na nsogbu na ihe a chọrọ. Minister Turhan, si Turkey na akụrụngwa ụlọ ọrụ, si akụziri ahụ ike ka ga-ekwu na a oké anya na ọtụtụ ihe dị mkpa ebe, [More ...]
Denizli Obodo ukwu, nke malitere mgbanwe na njem ọha na eze maka ngwa ngwa, akụ na ụba na nke dị mma nke ndị Denizli, na-eweta nhazi na ngwa ọhụrụ n'ọtụtụ ahịrị. 6 ga-ebido eriri ụgbọ ala gburugburu 60 na mpaghara dị iche [More ...]
Onye Minista nke Transportgbọ njem na ihe owuwu M.Cahit Turhan kwupụtara na ndị njem nde 3,7 natara ọrụ site na ọdụ ụgbọ elu n'oge Eid al-Adha, nde ndị njem 4,1 họọrọ bọs na nde ụmụ amaala 2,5 họọrọ iji ụgbọ oloko. Turhan, kwuru n’oge ezumike Eid al-Adha [More ...]
Ọzụzụ Ndị Nlekọta EU nyere maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na Elazig
EBUAS 120 malitere inye onye ọkwọ ụgbọ ala ọzụzụ na ụkpụrụ EU. Na usoro nke izizi, a tụlere nkwukọrịta, nkà, njikwa iwe na afọ ojuju na ọzụzụ elekere 6. Atakan Yildiz, onye na - azụ ọzụzụ na onye guzobere ụwa mmepe onwe onye yana Onye na - ahụ maka Nkwurịta Okwu Dị Irè [More ...]
Obodo Denizli Obodo ukwu na-aga n'ihu na-eme ka okporo ụzọ dị ngwa ma dịkwa nchebe site na ụzọ njikọ dị mma. Ali Dartanel Street 2 mepere emepe na nkwụsị ahụ doziri nsogbu okporo ụzọ na mpaghara ahụ. A na-arụ ọrụ ụgbọ njem na Denizli [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality kwuputara ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala na trams na-akwụghị ụgwọ maka ememe nke ịchụ-aja bịara na ọnụ ọgụgụ ndekọ. Usesgbọ ala na Akçaray Tram kpọtara ụmụ amaala ebe ha chọrọ ịga site na-arụ ọrụ ike. Site na Bus na Tram n’oge Eid al-Adha [More ...]
Urslọ ahịa Azụmaahịa na Ọrụ Bursa (BTSO) na-aga n'ihu na Nleta Asọmpi Mba Ndị Dị na Mba (UR-GE) maka akụkụ ahụ, otu n'ime ngalaba dị mkpa nke ngalaba na-ahụ maka ụgbọ ala. Ihe oru ngo a bu ime ka ndi oru ike di na okirikiri zuru uwa. UR-GE bụ nke BTSO kwadebere site na nkwado nke Ngalaba Azụmaahịa [More ...]
Obodo Bilecik emeela nhicha ezumike zuru oke na 6 K Smart Stops n’obodo anyị. Na mgbakwunye na ọrụ nhicha ahụ a na-eme na Bilecik iji mee ka ụmụ amaala anyị rie nri mara mma ma nwekwuo mma, 6 [More ...]
Eskişehir Metropolitan Municipality, nke na-enye nnukwu ohere ịnweta ebe ọ bụla obodo ahụ ma ghara ichefu ụmụ amaala ahụ nwere nkwarụ na ọrụ ndị o mejuputara, na-ewepụkwa ihe mgbochi na ọrụ ndị njem efu. Na oru ngo na-emejuputa atumatu na Turkey nwere nkwarụ ụmụ amaala [More ...]